MGBANWE GBURUGBURU EBE OBIBI NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Ịmụ ihe odide gburugburu ebe obibi na Windows 10
Maka njikwa ziri ezi nke ngwaọrụ mpụga na kọmputa gị, a ghaghị imelite ndị ọkwọ ụgbọala mgbe niile. Nke a ga - enyere aka wepu ọtụtụ nsogbu na ngwaike na ndakọrịta. Ebe ọ bụ na a tọhapụrụ mmelite ọtụtụ mgbe, ma nyekwa na enwere ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala na kọmputa, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịhapụ ihe niile emelitere.
Mana ekele maka ngwanrọ data ngwanrọ nke dị na usoro ihe omume ahụ Nchịkọta ọkwọ ụgbọala SnappyỊ nwere ike imelite ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa gaa na nsụgharị kachasị ọhụrụ n'enweghị ịme onwe gị site nwelite nlekota oru mgbe niile.
Anyị na-akwado ịhụ: Usoro kachasị mma maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala
Download ihe ngwugwu di ugbu a
N'adịghị ka ihe ọkwọ ụgbọala na ihe omume ndị dị otú ahụ, Snappy Driver Installer adịghị achọpụta na-akpaghị aka maka nsụgharị ọhụrụ, yana ihe niile dị mkpa iji aka rụọ, nke nwere ike iyi ihe siri ike. Ma n'eziokwu, ihe niile ị ga - eme bụ ibudata ngwugwu ọhụrụ ahụ, ọ ga - achọpụta ndị ọkwọ ụgbọala na - efu.
A na-eme nkwado ndabere tupu ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala, ma ọ bụrụ na ịlele igbe kwesịrị ekwesị. Nchekwa ga-enyere aka laghachi kọmputa na steeti ọ dị tupu e debe ya.
Ị nwere ike weghachite usoro ahụ n'oge ịmepụta akwụkwọ ndabere site na ịpị bọtịnụ aka nri na "Ịmepụta bọtịnụ ndabere".
Usoro ihe omume ahụ nwere ike ịwụnye naanị ndị ọkwọ ụgbọala na akara na akara ngosi, na iche iche ha enweghị ike ịrụnye ya, dịka na DriverPack Solution.
Na nchịkwa Driver Snappy, ị nwere ike ịgbanwe agba nke isienyo ahụ.
Iji nweta atụmatụ ndị ọzọ ị chọrọ iji rụọ ọrụ "Usoro ọkachamara". Ọ ga-emeghe ọrụ maka ndị ọrụ dị elu. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịwụnye nsụgharị ochie ma ọ bụ hụ ndị ọkwọ ụgbọala niile arụnyere na kọmputa gị.
Na-echekwa ndị ọkwọ ụgbọala na kọmputa
Na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke usoro ihe omume ahụ, ị ​​nwere ike ibudata nsụgharị zuru ezu nke na-ebu ihe karịrị 12 gigabytes. Ma na mbipute a, enwere ọtụtụ ngwaahịa na-enweghị isi, ya mere ị nwere ike ibudata ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa ozugbo na usoro ihe omume ahụ, na-egosi naanị ụzọ zọpụta na ịhọrọ igbe nlele dị mkpa. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike weghachite ha site na ịpị faịlụ ahụ na nchekwa nchekwa.
N'elu aka ekpe bụ nkọwa kachasị mkpirikpi banyere usoro ahụ, ma ọ bụrụ na ị pịa ya, windo njikwa ngwaọrụ ga-emeghe.
Nnukwu nchekwa data nchekwa
Ntughari nke zuru oke
Ikike ibudata ndị ọkwọ ụgbọala
Obere ihe omuma
N'agbanyeghị interface dịtụghị nghọta, Snappy Driver Installer bụ otu n'ime ngwa kacha mma maka imelite ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na kọmputa. Ihe kachasị pụta ìhè bụ nbudata nke ngwaahịa software dị mkpa, nke ga-aba uru maka ndị nwere njikọ Ịntanetị dara ogbenye.
Nbudata nchịkọta ihe ntanetị maka ntanetị maka Free
Advanced Driver Updater Ngwuputa Uzo nke uwa Onye nlele ịkwọ ụgbọala Ọkwọ ụgbọ ala
Snappy Driver Installer bụ ngwanrọ ngwanrọ dị elu maka ịchọta, ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala na-emelite ngwa ngwa maka ngwaike na ngwanrọ arụnyere na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ.
Onye Mmepụta: BadPointer